Hebei Besttone Fashion Co., Ltd.tọrọ ntọala na 2005, bụ ọkachamara na ụlọ ọrụ azụmahịa zuru oke na-etinye nyocha nyocha na mmepe, Pu uwe, akwa akwa, uwe na ngwa ahịa n'èzí. Companylọ ọrụ ahụ nwere ọmarịcha nhazi na otu ndị na-emepụta ihe iji hụ na njikọta chiri anya site na nyocha na mmepụta.
Besttone etinyela aka na olụsọ maka afọ 20, ma guzobekwa usoro ntinye zuru oke, na-etinye ma na-eje ozi ọtụtụ ndị ahịa kachasị elu. A na-ebupụ ngwaahịa na Europe / Asia na Africa na mba ndị ọzọ. O meela ka ọ bụrụ ọkachamara na-ahụ maka ọrụ mbupụ, nke ọhụụ na nke ọrụ, nke meriri otuto sitere n'aka ọtụtụ ndị ahịa a ma ama na Europe na United States, wee nweta ihu ọma dị mma maka ụlọ ọrụ ahụ.
Mgbe site na nkukota nke ike na teknụzụ, e wuru ụlọ ọrụ nke Besttone ma tinye ya na afọ 2017. factorylọ ọrụ a nke dị n'obodo nke onye isi njikwa anyị ka o wee nwee ike ijikwa. O nwere ihe karịrị ndị ọrụ 500, yana usoro 15 nke usoro mmepụta dị elu. A na - azụta igwe niile na usoro mmepụta site na nnukwu ụlọ ọrụ akụrụngwa ọkachamara, ma gafere site na nchekwa mba na ogo. O nwekwara otutu ulo oru ulo oru ndi mmadu nwere onwe ha, dika ime ihe, igbutu, ikwa akwa, imecha, nyocha na ichikota, ya mere na ulo oru ulo oru nwere ike meputa onwe ya ma jikwa onwe ya. A na-azụ ndị ọrụ ọ bụla na usoro mmepụta site na nka na nchekwa ngwaahịa iji nweta ọrụ nrụpụta siri ike. Ihe ndị a niile nwere ike ịkwado ngwaahịa dị elu yana oge nnyefe ọsọ ọsọ. Factorylọ ọrụ ahụ jiri usoro njikwa arụmọrụ. Otu oge ngwaahịa nditịm na jikọrọ ndokwa si ịzụta, mmepụta ka nkwakọ na njem site Besttone factory onwe ya. Ọzọkwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe eguzobewo usoro usoro ọrụ kacha mma na soplaya na njem.
Mgbe ọtụtụ afọ nke ike gbakọtara, na ntinye nke ọtụtụ akụ dị elu, ugbu a, Besttone na-abanyekarị n'ọhịa ọhụrụ - ngwaahịa nchebe n'èzí. Mmepụta gụnyere uwe n'èzí goods ihe ọkụkọ na nkọwapụta ndị ọzọ dị n'èzí, dịka uwe aka, ịchafụ, ikpere ụkwụ, nkwojiaka, akara aka, ikpuchi, nkpuchi ihu, akpa azụ, akpa akwa, akpa aka, okpu na-ekpo ọkụ, akpa ụra, neckerchief na ihe ndị ọzọ ụdị nile nke mmepụta nchekwa n'èzí. Mmepụta niile nwere ike izute asambodo ụkpụrụ mba ụwa.
Dabere na ngwaahịa ndị dị elu ma na-eduzi mkpa ndị ahịa, Besttone aghọwo ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị iche iche na-ejikọta uwe / uwe / ngwaahịa ndị dị n'èzí. "Strictdị siri ike dị ka ntọala ahụ, ihe ndị ahịa na-achọ dị ka onye ndu, ọrụ dị elu dị ka nzube" Nke a bụ nkwupụta anyị na-agbanwe agbanwe nke ụlọ ọrụ Besttone na ndị ọrụ ọ bụla Besttone ga-agbaso. Ekwenyere m na n'ọdịnihu dị nso, Hebei Besttone fashion Co., Ltd. ga-abụ kpakpando na-enwu gbaa na-enwu n'ụwa.